အကြောင်း - Myanmar Citizens Bank (MCB)
MPU-JCB International Debit Card
MCB MPU Debit Card
Citizen JCB Prepaid Card
Senior Citizens Special Fixed Deposit
JICA SME နှစ်ဆင့် ချေးငွေ
Mini Grid Bridge Loan
နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
Work at MCB
Online Branch Booking
MCB isapublic bank established in 1991
မြန်မာနိုင်ငံအထူးကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ကုမ္ပဏီများမှတ် ပုံတင်ရုံး၏ (၃၀-၁၀-၁၉၉၁) ရက်စွဲပါ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် (၂၇၄/၁၉၉၁-၉၂) ဖြင့် မှတ်ပုံတင်၍ အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ (၂၅-၅-၁၉၉၂) ရက်စွဲပါ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အမှတ် မဗဘ/ဂျေ(အိုင်)-၁(၅)၁၉၉၂ ဖြင့် ခွင့်ပြုချက်အရ ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၂-၆-၁၉၉၂) ရက်နေ့မှစ၍ အမှတ်(၃၈၃)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဘဏ်ဖွင့်လှစ် ၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ (၁၀-၁၈-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အမှတ် မဗဘ/ပဘ (အာရ်) ဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ငွေ‌ကြေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေ ပုဒ် (၁၇၆) အရ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ခွင့်ပြုမတည်ငွေရင်းမှာ ကျပ် (၇၅) ဘီလီယံဖြစ်ပြီး ထည့်ဝင်ပြီးမတည်ငွေရင်းမှာ ကျပ် (၅၂) ဘီလီယံ ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်သည် (၁၇-၈-၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် ဗဟိုဘဏ်မှ နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် (Authorized Dealer License) ကိုရရှိခဲ့ပြီး SWIFT (Society for Worldwide Inter Bank Financial Telecommunication) membership ကို (၅-၁-၂၀၁၃) ရက် နေ့တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။
Correspondent Bank များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဘဏ်၏ Customer များအား နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် စာရင်း ရှင်စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ၊ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ Bank Guarantee လုပ်ငန်းများ၊ Account Transfer လုပ်ငန်းများ၊ RIA Money Transfer and Foreign Exchange Market လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
(၂၄-၁၀-၂၀၁၁) ရက် နေ့တွင် Money Changer License ရရှိပြီးနောက် ကျောက်တံတားဘဏ်ခွဲ၊ မူဆယ်ဘဏ်ခွဲ၊ မန္တလေး ဘဏ်ခွဲ၊ ဒေါပုံဘဏ်ခွဲတို့တွင် Money Changer Counter များဖွင့်လှစ်၍ နိုင်ငံခြားငွေရောင်းဝယ် ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
Visa, Master Acquiring လုပ်ငန်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောင် ရွက်ခဲ့ပြီး Citizen Card (Master Card) Issuing ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်မှ ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်သည် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း၌ စာရင်းတင်၍ အစုရှယ်ယာများအား အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် လက်ရှိအရည်အချင်းများအပြင် အရည်အချင်းအသစ်များ နှင့် ပြည့်ဝစေရေးအတွက် သင်ကြားရေးနှင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်မှုသည် ဖန်တီးမှုမြင့်မားသော ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်အစီအစဉ်များ၊ ထိ ရောက်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ ပညာရပ်များအား သင်ကြားပို့ချပေး သော ပညာရှင်အဆင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လေ့ကျင့်သင့်ကြားရေးအစီအစဉ်များဖြင့် အောင်မြင်စွာ ဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အလားတူပင် ပြည့်ဝသော ဘဏ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနှင့် ခေတ်မီ/ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာ ဖြင့်သာ အောင်မြင်နိုင်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် ရုံးချုပ်နှင့်ဘဏ်ခွဲများ ချိတ်ဆက်လျက် ပင်မဘဏ်လုပ်ငန်း စနစ် (Core Banking System) အား (၁၄.၁၀၂၀၁၈) ရက်နေ့စ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက် ရှိပါသည်။
We’ll be more than happy to answer any concer you may have.
© 2022 MCB. All Rights Reserved.